FIFIDIANANA LOHOLONA : Raikitra amin’ny 11 desambra 2020 ny latsa-bato
Nankatoavina nandritra ny filan-kevitry ny Governemanta, izay natao omaly hariva, fa ny zoma 11 desambra 2020 no hanatanterahana ny fifidianana Loholona, araka ny tolo-kevitra avy amin’ny Vaomieram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana na Ceni. 10 septembre 2020
Ity farany dia nanamarika fa tsara kokoa raha amin’ny volana desambra io no hanatanterahana ny fifidianana Loholona mba tsy hisian’ny fahabagan-toerana eo anivon’ity andrim-panjakana ity. Araka izany dia tapaka teo anivon’ny Governemanta fa ny datin’ny zoma 11 desambra 2020 no hotanterahina ny fifidianana Loholona manerana ny Faritany enina eto Madagasikara. Nampahafantarina tamin’ny ofisialy izany tamin’ny alalan’ny tatitry ny filan-kevitry ny Governemanta, omaly hariva. Nampahafantarina niaraka tamin’io ihany koa ireo daty rehetra tokony ho fantatra mifandraika amin’izay fiaterahana ny Fifidianana Loholona izay.
Marihina fa ireo mpifidy vaventy hanatanteraka ny latsa-bato dia ireo ben’ny tanana sy mpanolotsaina kaominaly. Nivoaka tamin’io , araka izany ny didim-panjakana izay manaika azy ireo hifidy. Manomboka ny 28 septambra 2020 amin’ny 9 ora maraina ka hatramin’ny alatsinainy 12 oktobra 2020 amin’ny 5 ora hariva no fe-potoana hananan’ireo maniry ho kandidà hanaterana ny taratasy filatsaha-kofidiany eny anivon’ireo sampana mpanara-maso ny fifidianana isaky ny Faritra (Ovec).
Ny 29 oktobra kosa no famoahan’ny Ceni amin’ny fomba ofisialy ny anaran’ireo tena Kandidà hofidiana Loholona isaky ny fari-pifidianana miaraka amin’ny mari-pamantarana azy ireo tsirairay avy. Araka ny tetiandro tapaka napetraka hatrany dia ny 19 novambra amin’ny 6 ora maraina no hanomboka amin’ny fomba ofisialy ny fampielezan-kevitra ary hifarana ny 9 desambra. Ankoatra izay dia nankatoavina nandritra ity filan-kevitry ny Governemanta ity ihany koa ny didim-panjakana mamaritra ny fandraisan’anjaran’ny lisitr’ireo Kandidà amin’ny fanontana ny biletam-pifidianana ka noferana ho 15 tapitrisa Ariary isaky ny lisitra sy isaky ny fari-pifidianana izany.
Ny Ceni no misahana manontolo ny fikarakarana ny fifidianana. Izy ireo no mandrafitra ny lisi-pifidianana izay miainga amin’ny didim-pitsarana avoakan’ny Fitsarana misahana ny ady amin’ny Fanjakana momba ny fifidianana ben’ny tanàna. Io lisitra io dia faranana farafahatarany iray volana mialoha ny hanatanterahana ny latsa-bato, izany hoe ny alarobia 11 novambra.